X2O ဗုံးကွဲမှု၏နောက်ဆက်တွဲများ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » X2O ဗုံးကွဲမှု၏နောက်ဆက်တွဲများ…
Posted by kai on Apr 16, 2010 in Critic, Myanma News | 16 comments
Bomb deadly bombs X2O
(ဧပြီ၁၅ )နေ့ညနေ ၃နာရီကရန်ကုန် ကန်တော်ကြီးစောင်းနှင့် သိမ်ဖြူယာဉ်မောင်းကွင်းအနီး X2O ရေကစားမဏ္ဍပ် လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး ၃လုံးပေါက်သည်ဟုပြောကြပြီး တချို့ က ၅လုံးတွင်သုံးလုံးပေါက်သည်ယူဆလေသည်။
လူ ၁၀ယောက်ခန့်သေဆုံးပြီး ၂ရာနီးပါးခန့်ဒဏ်ရာရကြသည်ဟု လက်ရှိသတင်းများက ပြောသည်။ (၁၆ ရက်နေ့မနက် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၈ ဦး ၊ ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၁၇၀ ဦးဖြစ်သည်) ဒဏ်ရာရသူများသဖြင့် သင်္ကြန်တွင်း ၌ဆေးရုံကြီးတွင် ဆရာဝန်မလောက်ငှမှု၊ သွေးမလောက်ငှတို့နှင့် လည်းရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။
တချို့ ကဗုံးမှာ တောင်းအေ့စ်ကားပေါ်မှ လက်ပစ်ဗုံးနှင့်ပစ်သည်ပြောပြီး တချို့ က မဏ္ဍပ်ရှေ့ အောက်မှတလုံးချင်းအချိန်ခြားပေါက်ကွဲသည်ပြောကြသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ လာရောက် ၀ိုင်းဝန်း ကြည့်ရှုသူများ၊ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သူများထဲမှ ကင်မရာများနှင့် လက်ကိုင်ဖုံးများနှင့် မှတ်တမ်းတင်၊ ရိုက်ကူး ပြောဆိုနေသူ လူကြီး လူငယ်အချို့ကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်တို့က ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ MRTV4တို့မှ ဗုံးကွဲသည့် သတင်းကိုဖြစ်ပွားသည့် ညနေထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာ MRTV 4မှာအင်တာနက်မှလည်း ဗီဒီယိုသတင်းအဖြစ်တင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ မနှစ်ကတည်းက သကြီန်တွင် ဗုံးပေါက်မည် သတင်းအကြီးအကျယ်ထွက်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မှ အမှန်တကယ်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းဓါတ်ပုံတက်လာရာတွင် ညီလင်းဆက်ဘလော့ဂ်(http://blog.nyilynnseck.com/)မှ အမြန်ဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာအတိုက်အခံများသတင်းဖလှယ်ရာအစုအဖွဲ့ ဖြစ်သော (8888peoplepower.yahoogroups.com )တွင်လည်း အလွန်လျှင်မြန်စွာ သတင်းများတက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ထူးခြားသည်မှာ ( Aung Zaw <aungzawaywd@yahoo.com>)အမည်ဖြင့်ဗုံးကွဲပြီး နာရီအနည်ငယ်အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်များပို့ခြင်း၊တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဗုံးဖောက်ခွဲသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြည်ပ အခြေစိုက် NCUM ( www.ncum.info ) အဖွဲ့ မှ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဖောက်ခွဲရေး သမား (၅) ဦးအား မဲဆောက်မှ တဆင့် ရန်ကုန်သို့ ၁၃/၄/၂၀၁၀ နေ့တွင်စေ လွတ်ကြောင်း မဲဆောက် နိုင်ငံရေး အသိုင်း အ၀ိုင်းမှ ပြောကြား ပါသည်။ NCUM အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြပါ။
အိုင်ပီလိပ်စာခြေရာခံချက်အရ ( IP Address Region: Krung Thep IP Address City: Bangkok)မှဖြစ်နေပြီး အမည်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာအရ ဧရာဝတီသတင်းဌာန တည်ထောင်သူ အမည်ကို ဆင်တူယိုးမှားပြုလုပ်ထားဟန်ရှိသည်။ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ နှစ်ကူးအတာသင်္ကြန်အတွက် ၁၂မှ ၁၆ ရက်အထိပိတ်ထားသဖြင့် မည်သည့်သတင်း၊ဖြေရှင်းချက်မှ တက်သည်မတွေ့ရပေ။
အဆိုပါ မှတ်ချက်မှာ… အစောဆုံးတက်လာသော ညီလင်းဆက် ဘလော့ဂ်၏ မှတ်ချက်များတွင်လည်း မြင်တွေ့ရပေရာ တစုံတဦး သို့ တစုတဖွဲ့ ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိုက်လံပြုလုပ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
ယခုပြုမှုချက်သည် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ရဲအဖွဲ့ များ၏ အကူအညီတောင်းခံပါက ရနိုင်မည့်အလားအလာရှိသည်။
အဆိုပါတရားဝင်စာများဖြင့် (အကယ်၍ )ဘန်ကောက်မြို့ အိုင်အက်စ်ပီမှ ၀က်ဘ်မာစတာ၏ LOGဖိုင်ကို တောင်းယူခွင့်ရပါက မည်သူမည်သည့်နေရာမှမည်သည့်ကွန်ပျူတာဖြင့် ပေးပို့ ခဲ့သည်ကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပေလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ကဖေးမှပို့ ပါကလည်း တပ်ဆင်ထားသော ဗီဒီယို ကင်မရာများတွင် ပေးပို့ သူရုပ်ပုံပေါ်နေနိုင်ပြီး ခြေရာကောက်လွယ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ စွပ်စွဲစာတွင် ဖေါ်ပြထားသော( NCUM) မှာ အမည်အားဖြင့် ( NCUB – National Council of the Union of Burma ) နှင့်ဆင်တူနေပြီး တဖွဲ့ တည်းမဟုတ်ပဲ ပြည်တွင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည် ဆိုပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့ အစည်းမှ ထုတ်ပြန်စာကို ပထမစွပ်စွဲစာတက်အပြီး ၆နာရီကျော်ကြာတွင် အောက်ပါအတိုင်းစာထုတ်ပြန်ကြားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
– ယခု ဖေါ်ပြချက်များမှာ သတင်းအချက်အလက်များများအရ ကောက်ကြောင်းလိုက်ပုံကို သုံးသပ်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မသိသေးသူများ သိစေရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
– မြင်သာသော အချက်အလက်တခုကို အရကောက်ပြရုံသာဖြစ်ပြီး မည်သူမည်ဝါဟု စွပ်စွဲရန်ရည်ရွယ်လိုရင်းလည်းမရှိပါ။
– မူရင်းစာမျာကို အပြာရောင်နှင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
– မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ မှတ်ချက်များပေး၍ ဝေဖန်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
(၁) ရန်ကုန်မြို့၊ ကရ၀ိတ်အနီး ကန်တော်ကြီးစောင်း ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် ဗုံးများ ပေါက်ကွဲပြီး လူအများသေကြေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Aung Zaw အမည်ခံသူ မှ <aungzawaywd@yahoo.com> အီးမေးလ်အား အသုံးပြုကာ (ဗုံးဖောက်ခွဲသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြည်ပ အခြေစိုက် NCUM ( www.ncum.info ) အဖွဲ့ မှ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဖောက်ခွဲရေး သမား (၅) ဦးအား မဲဆောက်မှ တဆင့် ရန်ကုန်သို့ ၁၃/၄/၂၀၁၀ နေ့တွင်စေလွှတ်ကြောင်း မဲဆောက် နိုင်ငံရေး အသိုင်း အ၀ိုင်းမှ ပြောကြား ပါသည်။ NCUM အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြပါ) ဟူသော သတင်းအား 8888peoplepower@yahoogroups.com အပါအ၀င် အီးမေးလ်အုပ်စုများသို့ လိုက်လံဖြန့်ဝေလျက် ရှိပါသည်။
(၂) အထက်ပါ သတင်းအချက်အလက်တွင် ပါဝင်သော ပြည်ပ အခြေစိုက် NCUM ဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ခြင်း မရှိပါ။ မြန်မာအမည်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ– မြန်မာနိုင်ငံ ဟု အမည်တွင်သော Nation Council of the Union of Myanmar (NCUM) အဖွဲ့အစည်းသည် ပြည်တွင်းအခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ပတွင် အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ငယ်သာ ထားရှိသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘယ်လိုယုံကြည်မှု မျိုးကို လက်ကိုင်ထားထား ဒီလိုအပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို
တိုက်ခိုက်တာကို လုံးဝ လုံးဝ ရှုံချပါတယ်
အမေရိကန်တွေကအကြမ်းဖက်ရင်ထောက်ပံ့ ငွေပေးတော့မှာမဟုတ်တော့ ဒီဟာကအမေရိကန်နဲ့မတဲ့တဲ့သူတွေလုပ်တာပဲ။
ဒီချုပ်ကတော့ သူ့အလိုလိုပြုတ်တော့မှာမို့တရားခံအမည်ခံခိုင်းတော့မယ်မထင်ဘူး။
oout tan sar ta taung sar myo tway ..sout sint ma shi te` alote ko lote tal….
သတင်း ပုံမှားရိုက် အခြားသော အတိုက်အခံအဖွဲ့များအားထုံးစံအတိုင်းအပုပ်ချ
ခြင်းတရပ်သာ ဖြစ်သည်ဟုLOGIC အရပြောနှိူင်ပါသည်……။အခြားBlog comment များတွင်လည်း
ဘာသာခြားနှင့်ကို မိုး သီး တို့အားထင်ယောင်ထင် မှားအပုပ် ချ အယူဝါဒ တွေစတာသာတွေ့ရသည်အတွက်
Editorရေ မြန်မာတို့အကြောင်းဆောင်း ပါးမှာဘယ် သူကငဖြူဘယ်သူ ကငမဲဆိုတာတော့ရေး သင့်နေပါပြီ…..။
Ko Ko Ag says:
‘ဆရာ့အမြင်ကတော့ လူမဆန်တဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်မှုကို ဘယ်သူတွေကပဲလုပ်လုပ် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကပဲ လုပ်လုပ် ရှုတ်ချပါတယ်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုလို မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်လို့ တင်စားရမယ့် သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာဖြစ်ခဲ့တာဟာ တော်တော်ဆိုးရွားပါတယ်။ အင်မတန်ကိုမှ ယုတ်မာကောက်ကျစ်သူရဲဘောကြောင်တဲ့လုပ်ရပ်ပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို ဘယ်သူကပဲလုပ်လုပ် အပြင်းအထန် ရှုတ်ချပါတယ်။ အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေ၊ အရပ်သူအရပ်သားတွေကို ထိခိုက်နစ်နာသေကျေပျက်စီးအောင် လုပ်ဆောင်တာမကောင်းပါဘူး။ အခု ဒီဗုံးဖောက်ခွဲမှု အပါအ၀င် ၉/၁၁ နယူးယောက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရှုတ်ချသလိုပဲ အာဖဂန်လို အီရတ်လို နေရာမျိုးတွေမှာ အရပ်သူအရပ်သားတွေကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာတွေမျိုး နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါတယ်’ – လူထုစိန်ဝင်း
ဘယ်လိုပဲ အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုပ်လုပ်….အဓိက က နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူတွေ အတွက်သာ သိရှိစေရန် အကြောင်း ရင်းဖြစ်လို့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူလုထုကို
ထိခိုက်တာကတော့ ၀မ်းနည်းစရာ တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်… နားမလည် နိုင်တာ တစ်ခုက Target တစ်ခုကို သိရှိဖို့ပဲ….ဘာအတွက် နဲ့လည်း….ဘာအကြောင်းနဲ့လည်း..ဆိုတာကို
သိဖိုိ့လို နေတာပါ……. ပြည်ပ အခြေစိုက် NIUM ကို စွတ်စွဲခြင်းကတော့ တစ်မျိုး တစ်ဘာသာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်….ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် မဲဆောက် နိုင်ငံရေးသမားတွေက
အကြမ်းဖက်သူ (၅) ဦး အား ရန်ကုန်သို့စေလွှတ်တယ်လို့ လူတိုင်းပြောနေကြတာ……မခွဲခင် အကွက်ကျကျ စီစဉ်ထားသလို ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာတော့ သိရှိနိုင်ပါတယ်…
သေဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ဒဏ်ရာရ ပြည်သူ လူထု အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာ ဖြစ်ရပါတယ်……….
One of the stars says:
ဗုံးပေါက်တဲ.သတင်းကိုသိရတာ အရမ်းကိုဝမ်းနည်းမိပါတယ် အားလုံးကိုယ်စားပေါ. အတုံ.အလှည်.ဆိုတာ ရှိပါတယ် ကိုယ်.အလှည်.ကြရင်တွေ.မှာပါ ..ဘုရားပေးတဲ.အပြစ်ကိုခံရပါစေ …
နေတိုင်း ဘုရားမှာ ကျိမ်စာတိုက်မယ်..စောင့်နေပါ..အပြစ်မဲ.တဲ.ပြည်သူတွေအတွက်..
( ကျေးဇူးပြုပြီး ဘုရားမှာကျိမ်စာတိုက်ကြပါ..တမျိုးလုံး တဆွေလုံး …..အသေဆိုးနဲ.သေကြပါစေ)
ကျွဲတွေ တွေ မြူးတော့ မြေစာ ပျက်ဆီးတာပေါ့ ဗျာ .. အလာကားဗိုက် အငှားထိုးခံသူတွေကလဲ ရှိကြသေးတယ်..အံပါရဲ့.. လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြာပါစေ ပြည်သူကိုတော့ သနားသင့်ပါတယ်..ဒီလောက်လုပ်နေကြရတာတောင် မ၀ကြသေးဘူး..။ အပြင်ကလူက အပြင်က လူ အထဲက လူကလည်း အထဲကလူ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းနဲ့ .. ပြည်သူဗိုက်လဲ ကပ် နားထောင်ကြည့်ပါအုံး…။
ဗုံး ခွဲတဲ့ ကောင်သိစေရန်။မင်းကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာ သတ်မယ်..
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေကိုထိက်လန့်အောင် လုပ်တာဟာဘယ်လိုမှမကောင်းပါဘူး သူတို့မကျေနပ်ရင်မကျေနပ်တဲ့သူကိုသွားလုပ်ပေါ့ မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတာကိုဝမ်းနည်းပါတယ် ဗုံခွဲတဲ့ကောင်တွေကိုသေဒဏ်ပေးသင့်တယ် မပေးခင် အားရပါးရနှိပ်စက်ချင်သေးတယ်
…………. နောင်ကိုဒီလိုမျိုး ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ ….
ပြည်သူအားလုံး သတိရှိရှိနဲ့ ညီညီ ညွတ်ညွတ် တစ်ယောက်လက် ကို တစ်ယောက်တွဲ ထားကြဖို့ လိုပါတယ်။ မည့်သည့်အကြောင်းကြောင့် မဆို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး အတွက် ကိုယ့် လက်ထဲ ၀ါးရင်းတုတ်ရောက်ရတဲ့ အဖြစ် ကို မရောက်စေ ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
စားစရာမရှိလို့ ခိုင်းတိုင်းလုပ်ပြီး လူသတ်ရတဲ့ အလုပ် ဟာ ကိုယ်ကိုတိုင်သွေးညှီ နံတွေ ပြည့်နေတဲ့ လူသားဟင်းကို စားရ သလိုနေမှာ ပါ။ ဒီ လိုပဲ ကိုယ့် ကို
မှီခိုနေတဲ့ မိသားစုကိုလဲ အဲ့ ဒီ့ အစာတွေ ကျွေးနေရ သလိုဖြစ်နေမှာပါ ။
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး နောက်နှစ်သင်္ကြန်ကျရင် လဲ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေမဖြစ်လာပါစေနဲ့ အများပြည်သူ အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ။
အဖြေကအရှင်းကြီးပါ..လုပ်တာ စစ်တပ်ကလုပ်တာပါပဲ..။ လက်ပစ်ဗုံးဒဏ်ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းကပြောတာက တော့ မဏ္ဍပ်ပေါ်ကပစ်ချတာပါပဲတဲ့.။ လူတွေမဆီမှာဆိုးလို့တောင်မဏ္ဍပ်က